Fanomanana ny lalaon'ny barea :: Mifampiandriandry ny Fanjakana sy ny FMF ary i Nicolas Dupuis • AoRaha
Fanomanana ny lalaon’ny barea Mifampiandriandry ny Fanjakana sy ny FMF ary i Nicolas Dupuis
Miseho lany ny fifampiandrasana eo amin’ny fanomanan-tenan’ny ekipam-pirenena taranja baolina kitra, kasaina hatao any Portigaly, amin’ny fiandohan’ny volana oktobra ho avy izao. Eo amin’ny hoenti-manatanteraka izany, ara-bola, no hisehoan’io endrika fifanipazana andraikitra io, raha ny resaka natao tamin’ny loharanom-baovao iray eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra sy ny mpanazatra nasionaly ary ny fanjakana.
« Efa nalefako tany amin’ny FMF ny fikasana hiatrika lalao ara-pirahalahiana sy fiofanana mandritra ny dimy andro any ivelan’i Madagasikara. Miandry ny valin-tenin’izy ireo izahay », hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barean’i Madagasikara.
Manizingizina ny filohan’ny federasiona fa: « miankina betsaka amin’ny lafiny vola izany ». « Efa nisy fivoriana nandrafetana ny fandaniana rehetra ho an’ny tetibola amin’ny fikarakarana ny lalao ara-pirahalahiana sy ny fihaonana amin’ny Ivoarianina, niarahan’ny Federasiona tamin’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena sy ny solontena avy amin’ny Fiadidina ny Repoblika. Miandry ny valiny izahay, amin’izao fotoana izao », araka ny fanazavan’ Andrianony Victorien, filoha vonjimaikan’ny FMF.
Manamafy anefa ny tompon’ andraikitra iray ao amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena fa : « efa imbetsaka no nifampidinika ny fanjakana sy ny FMF, ka miandry ireo vaovao feno avy amin’ny rafitra mifehy ny baolina kitra ny minisitera ». Nilaza mihitsy ity tompon’andraikitra ity fa : « efa vonona ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena amin’ny fitadiavana ny hoenti-manana ara-bola saingy mbola tsy feno tsara ny pitsopitsony takian’izy ireo amin’ny federasiona, hahafahana manatanteraka izany ».
Isan’ireny ny eo amin’ny ekipa hanaovantsika ny lalao ara-pirahalahiana, ny teti-bidin’ny fandaniana…
Tapa-kevitra ny mpanazatra nasionaly fa any Portigaly no hiatrika an’io lalao ara-pirahalahiana io izy ireo satria mbola tsy azo anaovana izany any Frantsa, araka ny nambarany. Manodidina ny 60 000 euros (manodidina ny 271 200 000 ariary) ny fandaniana amina lalao ara-pirahalahiana amin’ny ekipam-pirenen’i Burkina Faso miampy ny teti-bolan’ny fiofanana mandritra ny dimy andro any Portigaly, raha ny fanazavan’i Nicolas Dupuis. Raha klioba Diviziona voalohany avy any Luxembourg indray no hifanandrina amintsika dia mihena ho antsasany izany fandaniana izany.
Baolina kitra – Lalaon’ny CAF :: Horesahina faramparany ny Fosa Juniors sy ny Cnaps Sport
Endri-pankalazana :: Mety haverina amin’ny fetin’ny Repoblika ny harendrina